Somalia: Ra’iisal wasaare Kheyre oo si kulul u cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee degmada Wadajir - Wargane News
Home Somali News Somalia: Ra’iisal wasaare Kheyre oo si kulul u cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa...
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si kulul u cambaareeyey qarax ismiidaamin ahaa oo lagu weeraray xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa tacsi loogu diray dadkii ku dhintay weerarkan, waxaa uu Alle uga baryay in dadkii ku dhintay in Jannadii Fardowso ka waraabiyo, isagoo inta dhaawacantay u rajeeyay inay ka bogsadaan dhaawaca.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in weerarkan lagu soo beegay xilli ay dadka Soomaaliyeed ku jireen diyaar garowga ciida iyo maalmihii u danbeeyey ee Bisha barakeysan ee Ramadaan, sidaas awgeedna ay tallaabadani ka tarjumeyso ujeedooyinka gurracan ee kooxda Al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay ra’iisal wasaaraha.
”Kooxda Al-Shabaab waa ay u soo jeesteen in ay shacabka isku qarxiyaan ee ma wadaan dan Soomaaliyeed, mana heystaan diin, waana in aan meel uga soo wadajeesano oo juhdi walba aan ku bixinaa. Waxey rabaan inay taariikhda ummada baaba’iyaan, waxey bartilmaameystaan maatada iyo carruurta, mana galaan wallaal”ayuu yiri ra’iisul wasaaraha.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa ugu baaqay dhalinyarada kooxdan ka tirsan inay ka faa’iideystaan fursada cafiska oo uu madaxweyne Farmaajo u fidiyey si ay dib u dhiska dalka uga qeybqaataan.